Gbasaa nnukwu PST faịlụ n'ime faịlụ ndị pere mpe - Nzọụkwụ Nzọụkwụ Nzọụkwụ
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Gbasaa nnukwu PST faịlụ n'ime ndị pere mpe
iji DataNumen Outlook Repair iji kewaa nnukwu faịlụ n'ime ndị pere mpe
Site na mmụba ngwa ngwa nke nkwukọrịta onwe onye na ozi, faịlụ Outlook PST, nke nwere data ndị a, na-agbasawanye nke ukwuu. Ya mere, mgbe ụfọdụ, anyị kwesịrị kewaa nnukwu PST faịlụ n'ime obere, maka otu n'ime ihe ndị na-esonụ:
Nnukwu faịlụ na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe ga-eduga na-adịghị ngwa ngwa na ọtụtụ arụmọrụ, dị ka search, agagharị, wdg, otú i nwere ike kewaa ya n'ime obere iberibe ma nweta ihe mfe na ngwa ngwa management na ya.
Versionsdị ochie nke Outlook (97 ruo 2002) anaghị akwado faịlụ buru ibu karịa 2GB, ma ọ bụrụ na faịlụ gị erute na njedebe ma ị ka chọrọ iji ya na nsụgharị ochie, mgbe ahụ naanị otu ụzọ bụ ịkewa ya n'ime obere iberibe.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta ọdịnaya nke nnukwu PST faịlụ gị Outlook, mgbe ahụ i nwere ike iji Outlook iji kewaa ya na aka.
DataNumen Outlook Repair nwere ike inyere gị aka kewaa nnukwu faịlụ PST ka ọ bụrụ obere.
Cheta na: Tupu ya kewaa oversized PST faịlụ na DataNumen Outlook Repair, biko mechie Microsoft Outlook na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike gbanwee faịlụ PST.
taabụ, wee họrọ nhọrọ ndị a:
ma tọọ oke oke na uru erughị 2GB. Akwadoro ka i jiri uru nke pere mpe nke 2GB mee ka faịlụ gi ghara iru 2GB ozo n’oge na adighi anya, 1000MB. Biko mara na unit bụ MB.
Họrọ faịlụ Outlook PST buru ibu dị ka isi iyi faịlụ PST ka emezie:
Can nwere ike itinye aha faịlụ PST ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ chọta faịlụ PST ka hazie ya na kọmpụta mpaghara.
Dika faili PST buru ibu, o gha adi na nhazi Outlook 97-2002. Yabụ, biko kọwaa usoro faịlụ ya na "Outlook 97-2002" na igbe ngwakọta
n'akụkụ isi iyi faịlụ dezie. Ọ bụrụ na ịhapụ usoro ahụ dịka "Ekpebiri Nchekwa onwe", mgbe ahụ DataNumen Outlook Repair ga-i scanomi isi iyi buru ibu faili PST iji chọpụta usoro ya na akpaghị aka. Agbanyeghị, nke a ga-ewe oge ọzọ.
Site na ndabara, mgbe DataNumen Outlook Repair na-enyocha ma kewaa isi iyi buru ibu buru ibu n'ime otutu ndi ozo, nke mbu edeputara faịlụ a bu xxxx_fixed.pst, nke abuo bu xxxx_fixed_1.pst, nke ato bu xxxx_fixed_2.pst, na na, ebe xxxx bu aha nke isi iyi PST faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, maka isi faịlụ PST Outlook.pst, na ndabara, faịlụ izizi gbawara agbawa ga-abụ Outlook_fixed.pst, nke abụọ ga-abụ Outlook_fixed_1.pst, nke atọ ga-abụ Outlook_fixed_2.pst, wdg.
bọtịnụ na-agagharị na họrọ ofu faịlụ aha.
Nwere ike ịhọrọ usoro nke faịlụ PST ahụ edozi na igbe ngwakọta
n'akụkụ igbe edozi edezi, usoro ndị nwere ike ịbụ Outlook 97-2002 na Outlook 2003-2010. Ọ bụrụ na ịhapụ usoro ahụ dịka "Ekpebiri Nchekwa onwe", mgbe ahụ DataNumen Outlook Repair ga-ewepụta faịlị PST arụnyere na dakọtara na Outlook arụnyere na kọmpụta mpaghara.
bọtịnụ, na DataNumen Outlook Repair ga start na-enyocha isi iyi PST faịlụ, na-agbake ma na-anakọta ihe ndị dị na ya, wee tinye ihe ndị a natara n'ime faịlụ PST ọhụrụ edozi aha ha ka edobere na Nzọụkwụ 6. Anyị ga-eji Outlook_fixed.pst dị ka ihe atụ.
Mgbe nha nke Outlook_fixed.pst rutere oke preset na Nzọụkwụ 2, DataNumen Outlook Repair ga-emepụta faịlụ PST ọhụrụ nke akpọrọ Outlook_fixed_1.pst, ma gbalịa itinye ihe ndị fọdụrụ n'ime faịlụ ahụ.
Mgbe faịlụ nke abụọ rutere oke nhazi oke, DataNumen Outlook Repair ga-ekepụta PST faịlụ ọhụrụ nke akpọrọ Outlook_fixed_2.pst iji nabata ihe ndị fọdụrụ, wdg.
Mgbe usoro ahụ gasịrị, ọ bụrụ na e kewara isi PST faịlụ buru ibu n'ime obere faịlụ PST dị obere, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe gbawara n'etiti PST faịlụ otu otu na Microsoft Outlook. You gha achoputa ihe nile nke faili PST mbu buru uzo gbasaa n'etiti ndia.
Cheta na: Demdị ngosi ga-egosipụta igbe ozi na-esonụ iji gosipụta ihe ịga nke ọma nke nkewa:
Na faịlụ PST ọhụrụ gbawara agbawa, ọdịnaya nke ozi na mgbakwunye ga-eji ozi ngosi dochie anya ya. Biko ịtụ ụdị zuru ezu iji nweta ihe edere na ya.
Gbasaa nnukwu PST faịlụ n'ime ndị pere mpe